Monday May 03, 2021 - 10:16:02 in Wararka by Burco Office 2
Magaalada Muqdisho waxa maalintii labaad ku sugan wafdi uu hogaaminayo ergayga gaarka ah ee wasaaradda arimaha dibadda ee dalka Qatar u qaabilsan dhexdhexaadinta iyo la dagaallanka argagixisada Mutlaq Majed Al-Qaxtaani.
Mr Mutlaq ayaa galinkii dambe ee maanta sidoo kale kulan la qaatay ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
"Mutlaq Majed Al-Qaxtaani waa dublamaasi u dhashay qadar oo aad uga shaqeeyay wadahadalada Taliban iyo Mareykanka oo dhexedhexaadinayay muddadi ay sirta ahayd iyo intii ay muuqdeen wadhadalada 2020," ayuu Mr Tiir,
"Waxa hadda lagu magacaabaa oo ay Qaramada Midoobey siisay ninka ugu wanaagsan oo dhexdhexaadiyo dagaalo meelo ka socdo marka billadaas ayuu helay," ayuu Mr Axmed Tiir.
"24 saac oo shalay ah ayay ku dhammaatay mushaakilkii Somaaliya ka jiray markii uu baarlamaanka ka noqday marka hadda wax la dhexdhexaadiyo maba jiro mucaaradkii iyo xukuumadii waxay u wada jeedsteen doorasho in la qabto oo lagu heshiiyay," ayuu yiri Mr Tiir.
"Diyaaradda Qadar haddii aysan Somaaliya ahayn Afrika lugta ma soo saarteen oo dulimaadkeedii Afrika oo dhan ayaa go'i lahaa sababtoo ah meel ay soo marto ma lahayn anagu marka meeshaan ku naalno sidaa ayay muhiim u tahay," ayuu yiri Dr Axmed Tiir.
"Markii ay cunaqabateynta ay saareen khaliijka, Soomaaliya waxay u noqotay albaabka kali ah ee dhanka hawada ee ay diyaaradaheeda mari kareen," ayuu yiri Mr Axmed Tiir
Rai'sul wasaare Rooble iyo Mutlaq Majed Al-Qaxtaani
"In aysan iyaga iyo anagaba dan inoo ahayn in arrinta ay faraha ka sii baxdo marka in ay arrintaa ka hadlaan," ayuu yiri Dr Ahmed Tiir.
"Iyaga oo aan ka hadlin mudda kordhintii oo xitaa aan dhihin wuu qaldanaa inay mucaaradka kala hadlaan ama ay ku qanciyaan in dhinac dowlada aysan kaalmeynayn ama ay ku qanciyaan arrintaa, ayuu intaa ku daray.